JIRTUU OROMOO KOO. ..? – Kichuu
HomeJIRTUU OROMOO KOO. ..?
● GOOTOOTNI OROMUMMAAF, OROMOO FI OROMIYAAF YAADAN GALATA QABU!
GOOTOOTA OROMOO OROMOO FI OROMIYAAF QABSAWAANIIF KABAJAA FI JAALALAATU ISAANIIN MALA.
☆Kan Oromoo fi Oromiyaaf hojjate Oromoon hin irraanfattu. Ummanni Oromoo kaayyoo qabsaa’oota isaanii osoo Oromoo fi Oromiyaaf qaabsawanii wareegaman, kaayyoo hoggantoota isaa lubbuun jiranii, walumaa galatti kaayyoo Oromoo fi Oromiyaa, mirga abbaa biyyummaa, mirga biyyaa teenya Oromiyaa irratti nagayaan bahanii galuu, mirga biyya teenya Oromiyaa irratti hojjatanii jiraachuu, mirga qabeenya Oromoo fi Oromiyaa akka alagaa fi hantuun hin saamamne eeggachuu, mirga Afaan isaatii fi aadaa isaa guddifachuu, mirga Oromummaan boonanii jiraachuu galmaan gahuun abadan hin hafu.
■BILXIGINNAAN Jawar Mohammed fi hoggantoota keenya Ummata Oromoo fudhatama akka dhabaniif duula hedduu gaggeessanii, maqaa isaanii balleessuuf waan hin godhin hin qaban. Garuu ummanni Oromoo hanguma isaan maqaa gootoota keenya xureessuuf maqaa addaa addaa itti baasaa deemaniin jaalalti Oromoo hoggantoota isaatiif qaban daran ida’aa dhufe malee takkaatuu hin irranne. Karaa kanaan milkaa’uu dadhabnaan sababa itti isaan hidhan barbaaduu eegalan. Kanaaf gootoota Oromoo, qabsaawaa Oromoo, qaalii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii hoggantoota keenya kana wajjiin wal qabsiisanii hidhan.
■BILXIGINNAAN gaafa Jawar Mohammed fi hoggantoota keenya hidhan ummanni Oromoo isaan ni irraanfatu ja’anii yaadaa turan. Haala kanaan Ummata Oromootii fi hoggantoota addaan baaauuf yaalaniis hin milkoofne hin milkaa’aan. Ummanni Oromoo hoggantoota isaa takkaatuu irraanfate hin beeku, huliis hin irraanfatu. Diraamaan BILXIGINNAA yoomiyyuu hin milkaa’uu.
■Jawar Mohammed fi hoggantootni keenya kan hidhaman badii qabaatanii osoo hin taane waan dhugaa Oromoo dabsuu didaniifi. Waan ilaalcha siyaasaa Oromoo fi Oromiyaaf yaadu qabaniifi. Waan Oromoo gananii diina cinaa dhaabbachuu didaniifi. Waan Oromummaa isaaniin boonanii saba isaaniitiif falmaniifi. Waa
■Jawar Mohammed fi hoggantootni keenya kan hidhaman badii qabaatanii osoo hin taane waan dhugaa Oromoo dabsuu didaniifi. Waan ilaalcha siyaasaa Oromoo fi Oromiyaaf yaadu qabaniifi. Waan Oromoo gananii diina cinaa dhaabbachuu didaniifi. Waan Oromummaa isaaniin boonanii saba isaaniitiif falmaniifi. Waan reebicha, hidhaa fi ajjeechaa Oromoo irratti raawwachaa jiru mormaniifi.
Kanaafuu sirna Oromummaa balfee Oromoo reebu, hidhu fi ajjeesu kanaan ni mormina. Mirga keenyaaf, mirga Oromootiif yeroo, bakkaa fi haala osoo hin filannee karaa danda’amu hundaan ni falmanna, mirga dhabne ni deeffanna.
#Oromoo #Oromummaa #Oromiyaa f dhaabbadhaa.
● Haqa Oromootii fi Oromiyaatiif dhaabbachuun dirqama Oromummaa keenyaati, dirqama Oromoo hundaati. Nurra kan nuuf nahu hin jiru, waliif dhaabbana, waliin dhaabbanna, tokkummaan keenyaan saba keenya Oromoof, biyya teenya Oromiyaaf falmanna.
Haqni kee haqa kooti,
Haqni kee haqa Oromooti,
Haqni kee haqa Oromiyaati.
Haqni kee hin dhokatu
ufumaan uf dubbataa,
Lilmoo godhanii awwaalu
gaara ta’ee muldhataa!
Haqne kee, haqni koo, haqni Oromoo, haqni Oromiyaa Abadan dhokatee hin hafu.
Haqni Jawar fi hoggantoota keenyaa haqa kooti,
Haqni Jawar fi hoggantoota keenyaahaqa Oromooti,
Haqni Jawar fi hoggantoota keenyaa haqa Oromiyaati.
Haqni keessan hin dhokatu
Haqni Jawar fi hoggantoota keenyaa , haqni koo, haqni Oromoo, haqni Oromiyaa Abadan dhokatee hin hafu.
Haqa Oromoo fi Oromiyaa dubbachuufiis tahe baasuuf haala fi yeroo hin filannu. Oromummaa keenya qabannee tokkummaa keenya jabeessine dhugaa Oromootii fi Oromiyaa irraa of duuba hin deebinu.
Otoo hin xumuurin dhiisuuf wanti nuti eegalle tokko hin jiru!
Gabroomsaan ni kufa,
Qabsoon itti fufa,
Bilisummaan ni dhufa!!!!
ODUU Hatattama WBON magalota oromiya Galaa jira | Jawar hidha bahuf Abdin jirachu kuno |Moha oromo
Bilxiginnaan dhukkee wal irraa kaafte kokkee wal qabdee jirti!